FLV Free in AVI Converter
> Resource > Video > Top 5 Best FLV Free in AVI converters
Haddii aad u jecel filimada, markaasaad garan waa weyn si ay u awoodaan in ay filimada aad jeceshahay ciriiri galay qaabab video kala duwan ee fudud isticmaalka. Waxaad ku dhejin kartaa flash ah oo ay wax si uu u daawado meel kasta oo aad tagto. Tan oo Blu-Ray ciyaartoyda iyo qalab kale oo ay leeyihiin dekedda USB ah si aad u ciyaari karto filimada qaab digital. Waxaa jira kaliya hal qabsado. Waxa ay u muuqataa sida qalab kasta oo aqbala qaabab kala duwan. Haddii aad jiran tahay oo aad ku fariin qalad ah oo ku saabsan qaab ah in aad filinka ee waa, ka dibna waxaad u baahan tahay qaab faylka Converter midig.
Halkan waxa ku jira 5 FLV ugu wanaagsan lacag la'aan ah si ay u AVI converters la heli karo hadda,
Bal aynu eegno si dhow Converter kasta.
Wondershare Video Converter Free Lagu qiimeeyaa sida app aad u awood badan in ay hubiso in si loo daboolo baahiyaha diinta video aad. Waxa kaliya ma ahan badasha FLV in AVI, laakiin sidoo kale badasha MP4, MKV, MOV, iyo iwm, oo aan khasaaraha tayada wax. Sida ay xawaaraha diinta, ka dhabayso 30x ka dhaqso badan wax converters kale. Waa ay haatan codsiga ugu wanaagsan ee diinta videos.
Freemake Video Converteris loogu talogalay beddelidda ee labada nooc ee files flash, FLV iyo Jabbuuti ah. Waxaad u bedeli karaan files si AVI, Mpg, MPEG-1, ama MPEG-2, taasi qalab wejiyo u diinta flash video files samaynta. Iyadoo goobaha ay yihiin horena u sahlan isticmaalka, waxaa kale oo jira fursado customizable.
Ma doonaysaa in ay qabsadaan aad jeceshahay Youtube videos? Barnaamijkan waxa fiican ee qaadashada files FLV iyo kuwa diinta in ay qaab AVI la maarayn. Interface waa dareen in la isticmaalo taas oo u fudud in ay ku shaqeeyaan ka markii ugu horeysay aad u bilowdo. Barnaamijku waa bilaash ah furin kuwaas oo mararka qaarkood piggybacks in la downloads lacag la'aan ah.
App wuxuu eegayaa sida inta badan ee aad qalab Windows, nadiif ah oo u fudud in ay maraan gui waa mid ka mid ah qalabka diinta ugu caansan agagaarka samaynta.
Dubaridi aad video iyo maqal ah kaliya ku saabsan qaab kasta, tayada rating, iyo size in yar seconds. Waxaad la xiriiri kartaa oo keliya ku saabsan file kasta inuu ciyaaro qaab ama qalab kasta. Kulan ay interface user weyn, aad leedahay free video aad u fiican oo halkan Converter audio oo loo isticmaali karo iyo in addoonsada oo kaliya dhowr saacadood.
Tani waa mid ka mid ah barnaamij kasta oo aad u baahan tahay diinta video. Sure sameeyaa FLV in avi taas oo ah waxa aad raadinayso maanta, laakiin waxa ay sidoo kale baddalaya waxa u dhaxeeya oo dhan oo ka mid ah qaabab kale ee waaweyn. Taas macnaheedu ma aha in aad soo eegto barnaamij kale berri marka aad u baahan tahay si loogu badalo qaab ka duwan.